Kunyengedza uye mureza wenhema kurwisana: kuburikidza nekunyengedza, kupesana-kutsanangura uye kuendesa kuNew World Order
Akaiswa mukati NEPNEWS, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 14 April 2017	• 16 Comments
Zvinoratidzika kuwedzera kuoma kunzwisisa kuti mutambo wacho unowedzerwa sei pasi rose chessboard. Munyika yezvimwe zvinyorwa zvemashizha, pane vamwe vakauya kuzokudza Donald Trump nevamwe vanoona Putin semunhu anorwisana neNew World Order. Nzvimbo idzi dzekupedzisira dzinowanzogadzirirwa [...]
Nepniews, nhau chaiyo, mazano, manyepa emanyepo, nhau nezvematongerwo enyika; chii chiri chechokwadi uye chisiri chechokwadi?
Akaiswa mukati NEPNEWS, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa28 December 2016	• 63 Comments
Takaona zvakanyanya kutyisa mumakore apfuura. Iyi webhusaiti dzimwe nguva yakashuma uye dzimwe nguva yakasvika pakugumisa kuti zvinhu zvakanga zvisina kunaka. Zvimwe zvakaongororwa zvakatungamirira kumhedziso yokuti kutya kwakaitwa uye vamwe kuti kune 'mureza wenhema'. Izvozvo hazvirevi kuti kurwisa kwose [...]
Total Visits: 1.300.973